Etu ị ga-esi mee njem njem azụmaahịa n'ụzọ ziri ezi | Save A Train
Home > Travel Europe > Etu ị ga-esi mee njem njem azụmaahịa n'ụzọ ziri ezi
Ihe mgbagha na ihe na-egbu oge nke ịlele ọdụ ụgbọ elu na mgbochi ụgbọala na ọdụ ụgbọ elu maara nke ọma azụmahịa njem. N'agbanyeghị ma ị na-aga na a obere Business njem ụgbọ okporo ígwè ma ọ bụ a ogologo otu ga-ewe ọtụtụ awa ma ọ bụ ụbọchị, Train Business njem bụ mgbe dị ọnụ ala karịa na ngwa ngwa karịa ndị ọzọ n'ụdị nke njem. ma ọsọ na-eri na-abụghị nanị uru nke okporo ígwè njem. Lee niile uru n'okpuru.
Research na-egosi na ndị kasị ewu ewu azụmahịa-yiri njem usoro bụ ụgbọ okporo ígwè, megide ikuku na hire ụgbọ ala njem. Train Business njem bụ kasị mode nke iga n'ihi na ihe karịrị ọkara nke ndị njem (otu ugboro elele nnabata na oge mbata e buru n’uche) ma na-efu fọrọ nke nta ka a ise nke price nke-efe efe na a atọ nke ịnya ụgbọ ị na-aga.
Business njem na ụlọ ọrụ njem na-azụ ahịa nwere Ohere iji belata ego njem ọbụna n'ihu na akwụkwọ tiketi na a n'ụzọ na-eme njem dị ka adaba dị ka o kwere maka njem. Gbalịa Online gbaa ụgbọ okporo ígwè ntinye akwụkwọ na SaveATrain na tupu atụmatụ bụ ụzọ kasị mma na-ịtụnanya amụọ!
Jirichaa oge gị mgbe Train Business Travel:
mgbe ị njem ụgbọ okporo ígwè ị ga-nhọrọ ka akwụkwọ a table oche tupu nke pụtara na ị nwere ike na-arụ ọrụ mgbe ị na-ejegharị ejegharị, Ịnwetacha uru ịrụ ọrụ gị oge nke ọrụ!
Lelee gị ọhụrụ njem ozi online ma ọ bụ ịdebanye aha maka SMS Ịma Ọkwa. Ị ga-amara gị ọkwa nke ọ bụla na-egbu oge ma ọ bụ nsogbu na-aga n'ihu na-ahapụ maka ebe.
Ụfọdụ n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè na-enye azụmahịa na klas lounges ebe mkpa ahịa pụrụ zuru ike na ohere wifi na-arụ ọrụ oghere. Bịarutere maka gị na njem a bit n'oge? -Uru nke ndị oghere ka ụfọdụ ọrụ mere mgbe ị na-eche.
Train njem nwere ike na-enye ọtụtụ owuwu dabeere na uru maka ya azụmahịa njem. Otu ihe atụ nke a nwere ike ịgụnye na-ojii na na-ụgbọ oloko Wi-Fi. Nke a na-enyere ndị nọ na anọ n'ọnụ mgbe na-aga n'ihu. Ihe nke bụ na o kwere omume ma ọ bụrụ na-ejegharị ejegharị site ụgbọ ala.
Schiphol na London Ụgbọ oloko
Otu ụzọ kacha mma na-amalite nri ụgbọ oloko gị azụmahịa njem bụ site ịzụ gị gbaa ụgbọ okporo ígwè online iji Zọpụta-A-Train !
Ị chọrọ Embed anyị blog post gị na saịtị, wee pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-business-travel%2F%0A%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
#businesstravel #railwaystation longtrainjourneys Train Travel ụgbọ okporo ígwè njem Travel traveltips